Ski Museum (Oslo), Holmenk Ski Ski Museum - Oslo
Eoropa Norvezy Oslo
Adiresy: Kongeveien 5, 0787 Oslo, Norvezy
Phone: +47 22 92 32 00
Toerana ofisialy: www.holmenkollen.com
Fotoana misokatra: 10: 00-16: 00
Vidim-bola: $ 13
Firenena any avaratra i Norvezy , misy fanatanjahantena ririnina be dia be, toy ny fifaninanana sy skiing. Noho izany dia tsy mahagaga raha ny mozika Ski ao Oslo no fijery malaza indrindra amin'ny Norwegiana sy ny mpizaha tany. Ho hitanao eto ny tranombakoka maotera malaza indrindra eran-tany, izay ahafahanao mamantatra ny tantaran'ny skiing tamin'ny 4000 taona, jereo ny artista nosy pola, ny fampiratiana ny snowboards sy ny fitaovana maoderina amin'ny ski. Afaka manararaotra ny fahitana an'i Oslo avy eny an-tampon'ny tilikambo ianao.
Nisokatra tamin'ny 1923 ny tranombakoka fisakafoanana. Izy io dia eo am-pototry ny tebiteby ao Holmenkollen , na, mivantana eo ambany. Io no iray amin'ireo toerana goavana indrindra ho an'ny mpizaha tany. Isan-taona, manomboka amin'ny taona 1892, ny Holmenkollen dia mihazakazaka fifaninanana ho an'ny mondialy amin'ny sambon'ny ski. Azonao atao ny mahatsapa amin'ny fomba mivantana ny fomba fitambaran-tsambo amin'ny simulator amin'ny ski.
Ny tranom-bakoka dia ahitana sarimihetsika skis nampiasain'ny lehilahy, nanomboka tamin'ny taona 600 taorian'i JK. Eto dia asiana famoriam-be goavam-be, nangonina mihoatra ny 4 arivo taona, ny karazana sy ny endrika samihafa, hatramin'ny ela ka hatramin'izao. Ny tranombakoka dia manararaotra ny skis sy skis farany amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, nomena ny tranom-bakoka. Ireo zavatra ireo dia mifandamina araka ny lohahevitra ary eo ambanin'ny kapoaka glasy, toy ny ao amin'ny akvarium. Ny Museum of Ski dia manolotra sary sy artifacts momba ny fitsangantsanganana voalohany nataon'ny lehilahy iray tany amin'ny faritra avaratra - Rual Amundsen tamin'ny taona 1911, ary koa ny dia nataon'i Ski Frontera Nansen tamin'ny 1888.
Ao amin'ireo talantalana ao ambadiky ny fitaratra dia misy sary avy amin'ny Olympika Ririnina any Oslo tamin'ny 1952 ary tao Lillehammer tamin'ny taona 1994, karazam-pankasitrahana isan-karazany: kaopy sy medaly.
Ny tranom-bakoka dia misy etona 3: mihetsika tsikelikely avy any amin'ny efitrano mankany amin'ny efitrano, avy ety amin'ny ety, ireo mpizahatany manatona ny elefanta. Izy dia manandratra azy ireo eo an-tampon'ny tilikambo, izay toerana misy ny deck.
Ny vidin'ny tapakila dia misy fiakarana mankany amin'ny tilikambo ary mankany amin'ny sehatra jump. Izany dia rafitra fananganana rafitra, naorina teo amin'ny tsikelikely, mifanitsy amin'ny tantsambo iray. Mipoitra ara-bakiteny eny amin'ny rivotra ny mpitsidika raha mahita ny tenany amin'ny sehatra fiambenana. Eto ianao dia afaka mahatsapa izay tsapan'ny mpitaingina matihanina rehefa mitsambikina izy ireo, ary mankafy ny fomba fijery mahavariana momba ny toeranan'ny Olympic sy ny tanàna manontolo. Misy fivarotana iray ao amin'ny tranombakoka, izay amidy ny akanjo ho an'ny mpitaingina sy ny fahatsiarovana, misy cafe.
Ilaina ny maka metro mankany Frognerseteren mba hijanona any Holmenkollen. Mila 30 minitra avy eo afovoan-tanàna izany.
Galerie National de Oslo
Park of walking sticks (Sigulda)
Miora ao amin'ny efitra fandroana - fitaovana inona no tsara indrindra hiatrehana ilay olana?
Snow on Easter - marika izay tokony ho fantatrao
Salope recipes à celery
Fanamboarana grapes amin'ny fararano
Sarin-dranomasina ao anaty aterineto
Inona no tokony hatao amin'ny kapa beige?